करोडाैँको वार्तालाप सहितको भिडियो बाहिरियो, नारायणकाजीको नैतिकतामा पूर्णविराम ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/करोडाैँको वार्तालाप सहितको भिडियो बाहिरियो, नारायणकाजीको नैतिकतामा पूर्णविराम !
करोडाैँको वार्तालाप सहितको भिडियो बाहिरियो, नारायणकाजीको नैतिकतामा पूर्णविराम !
२५ मंसिर, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको नैतिकतामा पूर्णविराम लाग्नेगरी एउटा करोडाैँको वार्तालाप गरेको भिडियो बाहिरिएको छ। श्रेष्ठकै कारण कसैको जीवन वर्वाद भएको विषय समेतसँगै बाहिरिएको छ ।
सिन्दुर हाल्ने बेलामा प्रेमिकासँग भागे बेहुला, बेहुलीले तुरुन्तै जन्ती आएका युवासँग …
तनहुँमा सवारी दुर्घटना, तल्लो गुणादीका मनोज खनालको मृत्यु दया छ भने Rip लेखनुहोस
आइतबारदेखि सबै विद्यालय सञ्चालन हुने